ကြီးမားသော အင်အားဖြည့်တင်းမှု ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု ကလော့ပ်ဆို - Yangon Media Group
ကြီးမားသော အင်အားဖြည့်တင်းမှု ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု ကလော့ပ်ဆို
အခက်အခဲများ ရှိနေသော်လည်း ချန်ပီယံလိဂ်အတွက် ချဲလ်ဆီးပြင်ဆင်ထား
Carabao Cup တတိယအဆင့် မဲခွဲမှုများ ထွက်ပေါ်လာ
အမ်ဘာပီ တစ်လနားရမည်ဖြစ်၍ ပီအက်စ်ဂျီ တိုက်စစ်အင်အားနည်းနေ
လီဗာပူးနည်းပြ ကလော့ပ်က အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ သြဂုတ်လအထိ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ကြောင့် အင်အားဖြည့်တင်းမှုများ ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ကြီးမားသော အပြောင်းအရွှေ့များ ကို မြင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ဟုဆို ခဲ့သည်။
လီဗာပူးသည် ယမန်နှစ် ရာသီက ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ဗိုလ် စွဲခဲ့သော်လည်း ပရီးမီး ယားလိဂ်တွင် ဒုတိ ယသာရခဲ့သည့် အတွက်ကစား သမားသစ်များ ထပ်မံခေါ်ယူ နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထား ကြသော် လည်း က လော့ပ် ကယခုကဲ့ သို့ ပြော ကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်။
လီဗာပူး အသင်း နည်းပြ ကလော့ပ် က ”တကယ် တော့ အင်အားဖြည့် တင်းမှုတွေက ပြုလုပ် ထားပြီးသားပါ။ ဘရူစ တာနဲ့ ချိန်ဘာလိန်တို့ဟာ မနှစ်ရာသီက ကောင်း ကောင်းမကစားခဲ့ရတာ ကြောင့် သူတို့လိုကစား သမားတွေဟာ ကျွန် တော်တို့အတွက် ကစား သမားသစ်တွေပါပဲ။ ဈေး ကွက်က သြဂုတ် ၈ ရက်မှ ပိတ်မှာဖြစ်လို့ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ခေါ် ယူမှုတော့ မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ် ပါဘူး”ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဂရေ့ဇ်မန်းကို ခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဘာစီလိုနာအတည်ပြု၊ တန်ကြေးလျော့နည်းရရှိခဲ့သဖြင့် တရားရင်ဆိုင်သွား မည်ဟု အက်သလက်တီကိုဆို
စက်လှေတိမ်းမှောက်၍ ပျောက်ဆုံးနေသော ကျောင်းသူလေးဦးအနက် တစ်ဦးကို ရှာတွေ့
ဒဏ်ရာကြောင့် ရီးရဲလ်မှ ဂျိမ်းရိုဒရီဂွက်ဇ် ထွက်ခွာရေး အဆုံးသတ်ဖွယ်ရှိ
အသင်းနှင့်ပွဲဦး ထွက်တွင် ဂိုးသွင်းယူခဲ့သော လူကာကူကို ကွန်တီချီးကျူး
အနာဂတ်တွင် အီတလီသို့ ပြန်၍ နည်းပြရန် ဆန္ဒရှိဟု ကွန်တီ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံ၊ ယခုရာသီ ချဲလ်ဆီးအသင်း၏
တာချီလိတ်၌ နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်း အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
တတိယအကြိမ်မြောက် Myanmar Youth Micro Flim Final Contest ပွဲတွင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖန်တီးသူ လူငယ် ၁၁ ဦးကို ဆု အမျိုးအစာ?
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ကျောက်မျက်ရိုင်းနှင့် ကျောက်စိမ်း အသားကျောက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချပွဲပြ
လက်မှုအနုပညာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲ မန္တလေး၌ ကျင်းပ
အမှိုက်ပုံမီးလောင်တာကို ဘယ်လိုကာ ကွယ်သင့်လဲဆိုရင် အစိုးရနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သက်ဆုနဒီ
အောင်ရဲလင်း၊ မင်းဦး၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ စိုးမြတ်သူဇာတို့ပါဝင်ထားသော ‘အနမ်းဝိုင်’ရုပ်ရှင်ဇာတ??
‘ကြီးလေးကြီး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ယခုလ ၁၉ ရက်တွင် ရုံတင်ပြမည်
အမေရိကန်ရဲ့ အင်ဒို-ပစိဖိတ် မဟာဗျူဟာ အောင်မြင်နိုင်ခြေ နည်းနေ